Zbrush Training - VERTEX ANIMATION STUDIO
Zbrush သည် ယခုခောတ်တွင် Popular အဖြစ်ဆုံးနှင့် အကောင်း ဆုံး 3D modeling software တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီသင်တန်းကို Photo realistic quality 3D model များဖန် တီးလိုသူများ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။ Zbrush ဖြင့် ရုပ်ရှင် များအတွက် 3D model များဖန်တီးခြင်း၊ သရုပ်ဆောင် အစားထိုး model များဖြင့် ရိုက်ကူးခြင်း။ 3D ကာတွန်းကားများ အတွက် ဇာတ် ကောင်ဖန်တီးခြင်း၊ Game character များဖန်တီးခြင်း စသည် ဖြင့် 3D နှင့် ပတ်သက်သော media များအားလုံးတွင် အသုံးပြု ကြပါတယ်။
3Ds Max, Maya စသေော software များတွင်လည်း 3D model များဆွဲ နိုင်သော်လည်း Zbrus လောက်ကောင်းအောင် မဖန်တီးနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် quality ကောင်းသော 3D model ကို ဖန်တီးလိုသူတိုင်း မဖြစ်မနေ တတ် မြောက်ထားသင့်သော software ဖြစ်ပါတယ်။ Zbrush software ကို computer media များတွင်သာမက 3D printer များနှင့်လည်း တွဲဖက် အသုံးပြုပါသည်။ 3D scan ပြုလုပ်လိုက်သော object များ လူ model များကို ​
Mesh Clean up ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရပါတယ်။ 3D scan နှင့် 3D printer များကို မြန်မာပြည်တွင်လည်း တွင် တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါသည်။ 3D printing လုပ်ငန်းများကို ပုံတူ ရုပ်ထု ထုလုပ်ခြင်း ၊ ရွှေထည်လုပ် ငန်းများအတွက် ဒီဇိုင်း ဆန်းများ ပုံလောင်းခြင်း စသည်တို့တွင် အသုံးပြုနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Zbrush software တတ်မြောက်ထားသူများ အတွက်လည်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။​
Zbrush သင်တန်းတက်ရန်လိုအပ်သော computer အမျိုး အစား​
Computer Graphic pen : Wacom or Other equivalent pen with pressure sensitivity function ( Cannot use iPad or iPad Pro)
Computer အခြေခံတတ်သူ မည်သူမဆို သင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ ပန်းချီ၊ ပန်းပု တတ်သူများ သင်ကြား ပါက ပိုမိုထူးချွန်နိုင်ပါတယ်။
3D Tree: Created and painted in Zbrush
Zbrush software သည် modeling အသားပေး ပြုလုပ်ထားသော software ဖြစ်သဖြင့် Animation မလုပ်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် တခြား animation ပြုလုပ်နိုင်သော Software များနှင့် မတူပဲ command များ button များ အများကြီးမှတ် သားစရာ မလိုပဲ စာရွက် ပေါ်တွင် ခဲတံ ဖြင့်ပုံဆွဲသလို 3D model များကို ဖန်တီးနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် Zbrush သင်လိုပါက Computer Graphic Pen ဝယ်ရန်လိုအပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
3D Character တစ်ကောင်ဆွဲတတ်ရန် တခြား 3D software များဖြင့် သင်ကြားပါက (၃) လခန့် ကြာ နိုင်ပါတယ်။ (၁)လ ခန့်မှာ software interface ကိုသင်ရင်းဖြင့် အချိန်ကုန်ပါတယ်။
Zbrush software ဖြင့်သင်ကြားပါက ပထမ တစ်ရက်အတွင်းမှာ ပင် ပုံကြမ်းများ ဆွဲနိုင်ပြီး ၊ (၁၀) ရက် အတွင်း အသင့်အတင့် ကောင်း သော 3D mdoel များဖန်တီးလာနိုင်မည်ဖြစ် ပါတယ်။​
Zbrush Course Outline​
Vertex Animation Studio တွင် Zbrsuh သင်တန်းတက်ရောက်ပါက အောက်ပါ topic များကို နည်းစနစ်တကျ တက်မြောက်စေရန် ဂရုစိုက် သင်ကြားပေးပါတယ်။
Pen set up and Software interface.
Sculpting Basic ( Draw, Mask, Hide , Cut)
Drawing with Reference image
Free Drawing style
Using custom menu and custom shortcuts
7. Quick character concept with Bone system
8. Hard surface modeling tools
9. Retopo concept and Unwarp
10. Editing with layer system
11. Unwrap and Texture painting
12.Export to 3D software or Printing machine
Zbrush ၏ modeling နည်းစနစ်မှာ 3D Brush များဖြင့် ကိုယ် လိုချင်သော ပုံကို စာရွက်ပေါ်တွင် ဆွဲသလိုဖန်တီးသွား နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ် လိုချင်သော ပုံကိ အမြန်ဆုံး ဖန်တီးနိုင်စေရန် အတွက် Vertex မှ ကိုယ် ပိုင်ပြုလုပ်ထားသော Menu, Shortcut များဖြင့် သင်ကြား ပေးပါတယ်။ တကယ်ရုပ်ရှင် Project များကို ပြုလုပ်သည့် အတိုင်း သင်ကြားပေးပါတယ်။ Concept ပြုလုပ်ရာတွင် ဖြစ်နိုင် သော
အပြောင်းအလဲ များကို ကြိုတင် စီစင်က ဒါရိုက်တာ လိုအပ်သည့် ပံမျိုးကို Real time ပြောင်း ပြနိုင်ခြင်း စသည့် တကယ် လက် တွေ့ အသုံးတဲ့သော နည်းစနစ် များကို တကယ့် Project များပြုလုပ်နေသော ဆရာ ကိုယ်တိုင်မှ သင်ကြားပေးသွား မည်ဖြစ်ပါတယ်။
Zbrsuh ဖြင့်ဆွဲသော model များကို 3D software များအားလုံးသို့ အဆင်တပြေ ပို့ပြီး animation ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ( 3Ds Max, Maya, C4D, Blender, unreal engine, unity,etc.)​
​ 3D model များကို Animation ပြုလုပ် ခြင်း၊ Game များတွင် အသုံးပြု ခြင်း
Zbrush ဖြင့်ဆွဲထားသော 3D model များသည် point သန်းပေါင်း များစွာ ရှိသဖြင့် Animation , Game engine များသို့ ပို့ရာတွင် Topology ဟုခေါ်သည့် Poly အကွက် များနေရာ တကျ ရှိမှုမှာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကို Zbrush ထဲမှာ Automatic ပြုလုပ်နိုင်ပေမယ့် manual လုပ်တာလောက် မကောင်းပါ။ Manual topology ပြုလုပ်ပါက အချိန် အလွန်ကြာကာ ငြီးငွေ့ စရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာ ကိုယ်တိုင် သုံးသော Automatic နှင့် Manual နည်းကို အသုံးပြု ကာ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နည်းများ ကိုသင်ကြား ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Werewolf hand Sculpted in Zbrush
Unwrap and Texture Painting
Zbrush ရဲ့နောက်ထပ်အသုံး ဝင်သော အချက်က 3D model ပေါ်တွင် Direct painting ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Zbrus မပေါ် ခင်က 3D model များအတွက် Texture ဖန်တီးရာတွင် Photoshop ဖြင့် ခန့်မှန်းရေးဆွဲခဲ့ ကြရပါတယ်။ ပြီးမှ 3D software များဖြင့် ပြန်လည် စစ်ဆေးကာ လိုအပ် သည်များကို ပြန်လည် ပြင်ဆင် ယူရပါတယ်။ ယခုခောတ်တွင်တော့ Zbrush software ဖြင့် 3D model ပေါ် တွင် Direct painting ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုသင်တန်း တွင် Texture resolution ကိုအကောင်းဆုံးရစေရန် Zbrush ဖြင့် Unwrap ပြုလုပ်ခြင်း၊ Photo များဖြင့် project painting ပြုလုပ်ခြင်း၊ Photo reference မရနိုင်သော Texture များကို alpha map များဖြင့် ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူခြင်း စသည်တို့ ကို ပြည့် ပြည့်စုံစုံ သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။
3D model Design များကို low poly ဆောက်ကာ 3D Render ပြုလုပ်ကာ Director, Producer များက Confirm ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင် ခြင်း များပြုလုပ်ကြသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက နောက်တကြိမ် low Poly ပြန်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ 3D modeling process တွင် Low poly ဆောက်ရသော အလုပ်မှာ အလွန် အချိန်ကုန်သော အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Zbrush ကို အသုံးပြုပါက model design များကို low poly မဆောက်ဘဲ Render layer များပြုလုပ်ကာ photoshop render ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Concept Design များကို photoshop ဖြင့် အမြန် Render ပြုလုပ်ကာ presentation ပြုလုပ်နည်းများကို ပါသင်ကြားပေးပါတယ်။
ယခုရှင်းပြထားသော နည်းများမှာ ပြည်တွင်း ရုပ်ရှင် လောကတွင် သိပ်အသုံးမပြု သေးသော်လည်း နိုင်ငံတကာ တွင် တွင်ကျယ် စွာ အသုံးပြုနေသော နည်းစနစ်များဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြား Game company များတွင် အလုပ်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် လိုသူများ အတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိသော နည်းစနစ် များ ပါဝင် အောင်သင်ကြားပေးပါတယ်။​